Manchester City oo heshiis hor dhac ah la gaaraysa Alexis Sanchez | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Manchester City oo heshiis hor dhac ah la gaaraysa Alexis Sanchez
(06-12-2017)Kooxda Manchester City ayaa lagu soo waramayaa inay qorsheyneyso inay dalab weyn u dirto weeraryahanka Arsenal Alexis Sanchez marka uu furmo suuqa kala iibsiga bisha soo aadan.
28 jirkaan ayaa qandaraaskiisa Emirates waxaa uu ku egyahay xagaagan, waxaana uu diiday inuu qandaraas cusub qalinka ku duugo isagoo indhaha ku haya mustaqbal fiican.
City ayaa ku dhow inay heshiis la gaarto Sanchez xagaagii lasoo dhaafay, kaliya waa laacibkii ugu fiicnaa xilli ciyaareedkii ugu danbeeyay, sababtoo ah Gunners oo aan awood u laheyn inay bedesho bedelka Chilean.
Hogaamiyaasha Premier League ayaa la filayay in ay mar kale u dhaqaaqaan bisha Janaayo – inkastoo haatan la qiimeeyo qiimo aad u jaban – lakiin haatan ayaa la filayaa inay soo bandhigaan dalab muhiim ah si ay tartan uga galaan kooxaha sida Real Madrid iyo Paris Saint-Germain.
Sida laga soo xigtay The Telegraph, Arsenal ayaa weli ku adkeysaneysa inay u baahan yihiin inay bedelaan ka hor inta aysan iibin Sanchez City, waxaana ay u baahan doonaan lacag ka badan 50 milyan ginni si ay heshiiska u dhacaan.
Sanchez ayaa la fahamsan yahay inuu dalbanayo mushaar dhan £ 300,000 todobaadkii koox kasta oo xiiseyneysa adeegiisa